Nhau - Isu Tichatsanangura Iyo Yakasarudzika Kubatsira KweSolar Photovoltaic Power Generation
Isu Tichatsanangura Iyo Yakasarudzika Mikana YeSolar Photovoltaic Power Generation
1. Simba rezuva isimba risingaperi simba rakachena, uye gadziriro yemagetsi ezuva inotenderera yakachengeteka uye yakavimbika uye haizokanganisike nedambudziko remagetsi uye kusagadzikana kwezvinhu mumusika wemafuta;
2, zuva rinovhenekera pasi, simba rezuva rinowanikwa kwese kwese, gadziriro yemagetsi yezuva photovoltaic inonyanya kukodzera nzvimbo dziri kure dzisina magetsi, uye ichaderedza kuvaka kwehurefu hwemagetsi grid uye hutepfenyuro mutsara simba kurasikirwa;
3. Chizvarwa chesimba rezuva hachidi huni, izvo zvinoderedza zvakanyanya mutengo wekushanda;
4, pamusoro pekutevera, rezuva photovoltaic simba rekugadzira harina zvinofamba zvikamu, saka hazvisi nyore kukuvadza, kumisikidza kuri nyore, nyore kugadzirisa;
5, solar photovoltaic simba rekugadzira harizoburitse chero marara, uye harizoburitse ruzha, greenhouse nemweya une chepfu, inzvimbo yakanaka yakachena. Kuiswa kwe1KW photovoltaic simba rekugadzira system kunogona kudzikisa kubuda kwe CO2600 ~ 2300kg, NOx16kg, SOx9kg uye zvimwe zvikamu ne 0.6kg gore rega rega.
6, inogona kushandisa nemazvo denga uye madziro echivako, haidi kutora nzvimbo yakawanda, uye magetsi ekugadzira magetsi ezuva anokwanisa kutora simba rezuva, zvobva zvaderedza tembiricha yemadziro nedenga, kudzikisa mutoro indoor air kutonhodza.
7. Iyo yekuvaka kutenderera yezuva photovoltaic simba rekugadzira system ipfupi, hupenyu hwebasa hwezvinhu zvekugadzira magetsi ndehurefu, iyo yemagetsi gadziriro modhi inochinja, uye simba rekudzoreredza kwesimba rekugadzira magetsi ipfupi;
8. Haiganhurwe nekuparadzirwa kwenzvimbo nenzvimbo; Magetsi anokwanisa kugadzirwa pedyo nekwaanoshandiswa.